သင်၏အိပ်မက်မီးဖိုချောင်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်အချက်အလက်များ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်းများ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 17, 2021 မေလ 14, 2021 Ron Wolf ဘ‌‌လော့ခ်, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick
Pinterest ဘုတ်များကို ဖြတ်၍ သင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သောတံသင်များကိုသိမ်းဆည်းပါ။
အကယ်၍ သင်နောက်ထပ်ထိုင်ခုံနေရာထပ်လိုပါကသို့မဟုတ်အခြားကြီးမားသောပစ္စည်းကိရိယာတစ်နေရာရာကိုထားရန်လိုအပ်ပါက U-shape layout သည်သင်သွားရန်ရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။
လူအချို့ကအိပ်မက်ဆိုးမီးဖိုချောင်ကိုစိတ်ကူးနေတုန်းဒုတိယတစ်ခုကသူတို့အသစ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲမည်ကိုသဘောပေါက်သည်။ အချို့ကမူအလွန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ကြပါ။ အကြံဥာဏ်တစ်ခုတည်းနှင့်ပင်မီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပင်မဖော်ပြနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာနောက်ဆုံးလူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အွန်လိုင်းများစွာရှိသည် အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ, သင်သည်အလွမီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းများအပြည့်အဝရောင်စဉ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ Pinterest မှသည်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မဂ္ဂဇင်းများအထိသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာနေရာတိုင်းတွင်စတင်ရှာဖွေသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဒီဇိုင်းကိုသင်ရှာတွေ့ပြီးနောက်မီးဖိုချောင်တွင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ Pinterest ဘုတ်များကို ဖြတ်၍ သင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သောတံသင်များကိုသိမ်းဆည်းပါ။ သင်ပြီးပြီဆိုလျှင်ဆွဲဆောင်မှုအနည်းဆုံးများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးရွေးချယ်စရာများကိုနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုအထိကျဉ်းပေးပါ။ တစ်ရက်နှစ်ရက်အကြာတွင်သင်၏စိတ်ထဲရှင်းလင်းသွားပြီးသင်၏မီးဖိုချောင်ကိုသင်ပုံပန်းသဏ္wantာန်ရှိစေမည့်အကောင်းဆုံးပုံကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
သင်၏နေရာကို ဦး စွာစဉ်းစားပါ
သင်နှစ်သက်သောအရာကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်သင်၏မီးဖိုချောင်နေရာမည်မျှရှိသည်ကိုစဉ်းစားရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ အခန်း၏အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္onာန်ပေါ် မူတည်၍ သင်အွန်လိုင်းကြိုက်နှစ်သက်သောမီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းကိုသင်အောင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏တိုင်းတာမှုအားလုံးကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ၊ ပရိဘောဂနှင့်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီမည်သည့်နေရာသို့သွားနိုင်သည်ကိုအတိအကျသိနိုင်ရန်သင်၏လျှပ်စစ်ဆိုင်များနှင့်ရေပိုက်များနေရာတွင်စစ်ဆေးပါ။ သို့မှသာသင်ချစ်မြတ်နိုးရသည့်အပြင်အဆင်နှင့်ဒီဇိုင်းသည်သင်၏အိမ်တွင်အလုပ်လုပ်မည်လားဆိုသည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။ သေးငယ်တဲ့မီးဖိုချောင်တစ်ကျွန်းနှင့်နံနက်စာဘားရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပေမယ့်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုသာ, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကြီးမားသောစီမံကိန်းမစတင်မီသင်၌သင်၏နေရာမည်မျှရှိသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်မီးဖိုချောင်အပြင်အဆင်များ၏ပင်လယ်ထဲတွင်သင်သည်ကွဲပြားသောအပြင်အဆင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့အတွက်နေရာအလုံအလောက်လိုချင်ပါသလား။ သင့်တွင်ဗီရိုများနှင့်ချက်ပြုတ်သည့်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်သောနံရံသုံးခုရှိပါက U-shaped ပုံစံတစ်ခုသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သင့်အားကောင်းမွန်သောချက်ပြုတ်နိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။ G-shaped ပုံစံတွင် cabinetry နှင့် appliances အားလုံးအတွက်နံရံသုံးခုပါရှိသည်။ သို့သော် U-shape နှင့်မတူဘဲ၎င်းတွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစတုတ္ထနံရံ - ဆိုလိုသည်မှာအခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်ကူပွန်အစိတ်အပိုင်းများကိုကိုင်ထားသည့်ကျွန်းဆွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်နောက်ထပ်ထိုင်ခုံနေရာထပ်လိုပါကသို့မဟုတ်အခြားကြီးမားသောပစ္စည်းကိရိယာတစ်နေရာရာကိုထားရန်လိုအပ်ပါက U-shape layout သည်သင်သွားရန်ရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ မီးဖိုချောင်သေးသေးလေးတစ်လုံးရှိသူများအတွက် L-shaped ပုံစံတစ်ခုသည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ထိရောက်မှုအားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်။ L-shape layout ကဲ့သို့ပင်ရဲလှေမီးဖိုချောင်အပြင်အဆင်တစ်ခုသည်သေးငယ်သောမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့လိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်နံရံနှစ်ခုတွင်သင်၏ဗီရိုများထားရှိခြင်းသည်သင့်အားချက်ပြုတ်ရန်အချိန်နှင့်ရွေ့လျားရန်နေရာအလုံအလောက်ရှိသည်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့၊ အသုံးအဆောင်များနှင့်ကျွန်းတစ်ကျွန်းနှင့်သင့်တော်ရန်နေရာအလုံအလောက်ရှိပါသလား။ သငျသညျကျွန်းတဝိုက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်းတစ်လွှားကရိယာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်နိုင်ကြောင်းလမ်းအတွက်? သို့ဆိုလျှင်မီးဖို၊ နစ်နှင့်ရေခဲသေတ္တာ၏အကွာအဝေးအတွင်းသင်၏မီးဖိုချောင်ကျွန်းကိုဗဟိုပြုမည့်ကျွန်းပုံစံတစ်ခုကိုသေချာပေါက်စဉ်းစားသင့်သည်။
သင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းလိုချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့နေရာမရှိဘူးလား။ Peninsula layout သည်သင်၏မီးဖိုချောင်ကိုအပိုဆောင်းထိုင်ခုံများ၊ သိုလှောင်ရန်နေရာများနှင့်မျက်နှာပြင်အကျယ်areaရိယာကိုပေးနိုင်မည့်နည်းလမ်းဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
အရောင်များသည်အခန်း၏ Vibe တစ်ခုလုံးအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏မီးဖိုချောင်အရောင်ကိုပညာရှိစွာရွေးချယ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်အခန်းတစ်ခုလုံး၏စိတ်နေသဘောထားတစ်ခုလုံးကိုသတ်မှတ်ပြီးမီးဖိုချောင်တွင်သင်မည်မျှအချိန်ဖြုန်းရန်လိုလိမ့်မည်ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်။ တောက်ပလေပိုကောင်းလေအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးမူဝါဒသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏မီးဖိုချောင်ကိုဖိတ်ကြားလိုပါကတောက်ပ။ အရောင်အသွေးစုံလင်သောအရောင်များကိုရှာဖွေပါ။ အစိမ်းရောင်၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဝါရောင်သို့မဟုတ်အရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်များသည်နံရံများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုနံရံများ၏အရောင်များနှင့်ကိုက်ညီပြီးအဆုံးစွန်သော wow အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပါ။ အလင်းပေါ်သို့အလင်းပေးခြင်းသည်သန့်ရှင်း။ အမြင်အာရုံပိုမိုကြီးမားသောနေရာတစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။ မီးအရောင်များကိုမျှမျှတတသုံးလိုပါကပိုမိုမှောင်သောကြမ်းပြင်များနှင့်ဗီရိုများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သတ္တုနှင့်ငွေရောင်တန်ဆာပလာများသည်အရောင်ခြယ်မှုနှင့်လုံး ၀ ကိုက်ညီပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများသည်မီးဖိုချောင်တိုင်း၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းမှာအများကြီးရှိခဲ့ရင် မီးပြုပြင် အတိတ်ကာလကအရည်အသွေးနိမ့်သောထုတ်ကုန်များကြောင့်သင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းပြuntilနာကိုဖြေရှင်းသည့်တိုင်အောင်ညစာချက်ပြုတ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်သတိပြုမိသောအခါအဆင်မပြေမှုမည်မျှကြီးမားကြောင်းသင်သိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အနာဂတ်မီးဖို၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ပန်းကန်ဆေးစက်၊ မိုက်ကရိုဝေ့နှင့်အခြားမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုပညာရှိစွာရွေးချယ်ပါ။ သင်အမှန်တကယ်အားဖြင့်မီးရှို့မီးပန်းတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ပါသလားသို့မဟုတ်လေးခုသာရှိသောမီးလုံးတစ်ခုကိုသင်သွားနိုင်သည်ဆိုပါစို့။ သင်ကပန်းကန်ဆေးစက်တစ်လုံးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ညာဘယ်ဘက်ကိုနေရာချမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဘယ်ဘက်၊ ညာညာလားစဉ်းစားပါ။ အာမခံကာလရှည်နှင့်သာလျှင်အမြင့်ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူကရိယာများအဘို့အသွားပါ။ အွန်လိုင်းသုတေသနကိုလုပ်ပါ။ ယခုအချိန်တွင်အားမလျှော့ဘဲစျေး ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်သေချာသည့်အပိုငွေအနည်းငယ်ပေးရသည့်တိုင်အောင်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ မီးဖိုချောင်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးနှင့်ကိုက်ညီမည့်ဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုလည်းသင်သေချာစွာလေ့လာပါ။
အပြင်ကြည့်ကောင်းတဲ့အပြင်သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်နေသင့်သည်။ သင်လိုအပ်သည့်နောက်ဆုံးအချက်မှာသင်၏မီးဖိုချောင်ကိုတည်ဆောက်ပြီးသုံးလအကြာအက်ကွဲသောကောင်တာတစ်ခုသို့မဟုတ်ပျက်ဆီးနေသောရေစုပ်ဖြစ်သည်။ နှမျးဖတျကြောကျကြွေပြားများ၊ စုပ်ကျောက်များနှင့်စကျင်ကျောက်များသည်သင်၏အစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအချို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဖြတ်ခြင်း၊ သုတ်ခြင်းနှင့်ပွတ်တိုက်ခြင်းများအားလုံးမှ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောဝန်ကိုခံနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်အမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့် Granit တွင်ဘက်မလိုက်သောအရောင်ခြယ်မှုပါဝင်ပြီးမည်သည့်အရောင်နှင့်မဆိုကိုက်ညီမှုရှိသည်။ ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်၍ အသေးစိတ်သို့မဟုတ်အသံတိတ်သွားနိုင်သည်။ ကြမ်းခင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၊ တာရှည်ခံသောပစ္စည်းများကိုလည်းသင်ရွေးချယ်ပါ။ ကြမ်းခင်းကြွေပြားများသည်ထိန်းသိမ်းရန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အခြားဖြေရှင်းချက်အားလုံးတွင်ယိုဖိတ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မီးဖိုချောင်အတွက်သစ်သားကိုရှောင်ကြဉ်ပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်ဈေးကြီးသော်လည်းမီးဖိုချောင်အတွက်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ ဥပမာပန်းကန်ဆေးစက်၏ချွတ်ယွင်းချက်ကိုသာစဉ်းစားပါ။ အကယ်၍ ရေစတင်ရေတက်လာပါကသစ်မာသို့မဟုတ်သစ်သားအစားကြွေပြားများသို့မဟုတ်ကြွေပြားများနှင့် ပို၍ သင့်တော်သည်။
သိုလှောင်ရန်အတွက်စီစဉ်ခြင်းသည်စစ်မှန်သောလိုလားသူတစ် ဦး သည်ဘယ်တော့မျှလျစ်လျူရှုမည်မဟုတ်ပါ။
သိုလှောင်ရန်အတွက်စီစဉ်ခြင်းသည်စစ်မှန်သောလိုလားသူတစ် ဦး ကိုဘယ်တော့မျှလျစ်လျူရှုမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏အပေါ်စတင်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ မီးဖိုချောင်ပုံစံဒီဇိုင်းသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းနည်းများကိုသင်မမေ့မလြော့ပါစေနှင့်။ သင်အွန်လိုင်းမီးဖိုချောင်များအတွက်စမတ်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များစွာကိုရှာဖွေပြီးမည်သည့်တစ်ခုကသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ Walk-in စားစရာခန်းသို့မဟုတ်ဆွဲထုတ်စင်များနှင့်အတူစားစရာခန်းစုံလင်သောအာကာသချွေတာများဖြစ်ကြသည်။ Lazy Susans သည်သင်၏အမြင့်ဆုံးနေရာကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသောသင်၏ထောင့်နေရာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်လည်းသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးကြသည်။ သင့်ရဲ့ဗီရိုထဲမှာသိုလှောင်မှုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသလား? အသုံးဝင်သောသိုလှောင်မှုနေရာဒုတိယထပ်ကိုအဆင်ပြေစွာဖန်တီးရန်နှစ်ထပ်စင်များကိုသုံးပါ။ ဗီဒိုများကြားတွင်ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာတစ်ခုနှင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်မသိပါက ၀ န်ထမ်းများ၏ကျယ်ပြန့်သောနေရာတွင်နေရာလွဲ။ မရသောဆက်နွှယ်သောပုလင်းများနှင့်ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်လုံလောက်သောနေရာတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
အလင်းရောင်လ်တာသည်မည်သည့်ဒီဇိုင်းကိုမဆိုသို့မဟုတ်ချိုးဖျက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မီးလုံးများ၊ မီးခွက်များသို့မဟုတ်နံရံမီးများကိုသင်ရှာဖွေသောအခါပညာရှိစွာရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိတွေ့ထားသောဝါယာကြိုးဆွဲပြားမီးများမှဖန်ခွက်ဖုံးလွှမ်းထားသောအလင်းရောင်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းထိတွေ့သောမီးသီးများထံမှသင်၏ရွေးချယ်မှုသည်သင်၏မီးဖိုချောင်အလင်းအတွက်ကျယ်ပြန့်သည်။ သငျသညျပြတင်းပေါက်မှသဘာဝအလင်းရောင်အလုံအလောက်မရရှိလျှင်, မီးဖိုချောင်တွင်ကြီးမားသော Chandelier ထားရန်သေချာစေပါ။ စားပွဲခုံများအောက်တွင်သင်ထွန်းထားရန်တပ်ဆင်ထားသောမီးများသည်သင့်စားပွဲခုံပေါ်တွင်ထွန်းလင်းရန်အစားအစာပြင်ဆင်ချိန်တွင်အလင်းအများကြီးလိုအပ်သောလူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်သောလ်တာမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေသင်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါကအလင်းကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ဝါယာကြိုးများအားလုံးကိုလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ရန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားငှားရမ်းကြောင်းသေချာပါစေ။
စိတ်ကူးယဉ်မီးဖိုချောင်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသည်အချိန်ကုန်သောစီမံကိန်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ သင်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်ဆန္ဒရှိသမျှကိုပြီးမြောက်ရန်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုထက်များစွာသာလွန်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်မီးဖိုချောင်အသစ်တစ်လုံးဆောက်ရန်အချိန်ရောက်ပြီဟုသင်ဆုံးဖြတ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာပါ။ သင်စိတ်ကူးထားသောအပြင်အဆင်အတွက်သင့်နေရာလွတ်သည်သေချာအောင်လုပ်ပါ၊ သင့်အရောင်ကိုပညာရှိစွာရွေးချယ်ပါ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပထမဆုံးပစ္စည်းကိုမ ၀ ယ်ပါနှင့်မီးဖိုချောင်အတွက်ကြာရှည်ခံသည့်ပစ္စည်းများကိုအမြဲရွေးချယ်ပါ။ သိုလှောင်မှုနေရာကိုသေချာစွာကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးအလင်းရောင်အလုံအလောက်နှင့်အမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ခုလုံးပေးနိုင်မည့်အလင်းချိန်ညှိချက်များကိုသင်သေချာစွာရွေးချယ်ပါ။
အများပိုင်သတင်း မီးဖိုခန်း မီးဖိုချောင်ပုံစံဒီဇိုင်း
Ron Wolf သည်ဝါသနာပါသောဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး DIY ၏စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်စာရေးခြင်းအတွက်စိတ်အားထက်သန်သည်။